Milamina ve ny Bluestacks? Eny, azonao ampiasaina amin'ny Windows & Mac - Softwares
Na izany aza, mitady valiny izay manazava ny fisalasalanao rehetra momba ny fiarovana ny BlueStacks?Ary androany dia tonga amin'ny toerana marina ianao. Eny, mba hamaliana ny fanontaniana amin'ny fohy raha azo antoka na tsia ny BlueStacks na tsia?
Azo antoka 100% raha ampiasaina.Fa raha mbola te hianatra bebe kokoa momba ny BlueStacks ianao dia vakio ny lahatsoratra iray manontolo izay nahavitanay ny fanapahana tanteraka ary nanazava ireo masontsivana sasantsasany izay azo antoka hampiasana ny BlueStacks.
Famerenana Bluestacks - Fampahalalana feno
Bluestacks dia programa izay maka tahaka ny rafitra fandidiana Android eo amin'ny biraonao. Amin'ny ankapobeny, ity rindrambaiko ity dia mihazakazaka ny rafitra fiasan'ny Android amin'ny rafitra fiasan'ny rafitrao. Azonao atao ny mihazakazaka ny rindranasa Android rehetra amin'ny alàlan'ny fampiasana BlueStacks amin'ny birao.
BlueStacks dia manana mpampiasa mavitrika ahitana mpisera 370 tapitrisa mampiasa azy. BlueStacks dia malaza amin'ny Gamers satria mamela azy ireo hilalao ny lalao tiany izay tsy misy amin'ny PC amin'ny alàlan'ny emulator, ary milalaova lalao toa ny finday PUBG , Call of Duty finday, sns.
Raha tsy azo antoka ny BlueStacks, dia nisy olona teo amin'ny mpampiasa 370 tapitrisa mety nitatitra bug, saingy tsy izany no izy satria tsy nisy nitory ny olana momba ny Bluestacks.
Mitady Emulator Android tsara indrindra ho an'ny Windows 10 ? Hamarino avy amin'ny anay Emulators faritra.
Moa ve ny BlueStacks manakana ny fahombiazan'ny PC-nao?
Io, io no fanontaniana apetraka indrindra, ary mety nikaroka momba an'io koa ianao. Eny, misy andiana famaritana ilaina raha te-hihazakazaka BlueStacks amin'ny PC ianao.Mba hampandehanana ny Bluestacks amin'ny PC dia mila tadidy 2 GB farafaharatsiny ianao.
Ny olona mazàna mametraka BlueStacks amin'ny PC manana famaritana ambany ary miafara amin'ny fanakantsakanana ny fahombiazan'ny PC-ny.Fa raha manana PC avo lenta ianao izay manana RAM lehibe mihoatra ny 2 GB ary napetraka ny processeur farany indrindra, dia tsy hanakana ny fahombiazan'ny PC-nao ny Bluestacks ary hilamina tsara.
Ireto misy famaritana ilainao raha te hihazakazaka ianaoBlueStacks eo am-baravarankelymilina:
Rafitra fikirakirana:Windows 7 sy ambony.
ram: 3 GB na lehibe kokoa.
Sehatra kapila anatiny:15 GB na mihoatra.
processeur:Misy processeur Intel na AMD.
GPU: Izay Nvidia GPU 710 na mihoatra dia hiasa.
Ireto misy famaritana ilainao raha te hihazakazaka ianaoBlueStacks amin'ny Mac:
Rafitra fikirakirana:Mac OS Sierra sy ambony.
ram: 4 GB na lehibe kokoa.
processeur:Mpikirakira Intel rehetra.
Manana programa maloto ve ny Bluestacks?
Mba hijerena raha toa ka misy programa ratsy na tsia ny BlueStacks dia nametraka BlueStacks amin'ny solosaina samihafa izahay izay misy antivirus isan-karazany napetraka ao toa QuickHeal, Norton 360, AVG, Avast, sns.
Ny antony nanaovanay an'io dia isaky ny mametraka programa manokana amin'ny solo-sainao ianao dia ny antivirus amin'ny solo-sainao no mandinika ny programa hijerena ny fisian'ny script ratsy. Raha misy ny script manisy ratsy ao amin'ireo kaody loharano amin'ilay programa izay apetraka, dia hamoaka hafatra mivantana eo amin'ny efijeninao ilay antivirus ary hamafa azy ireo ho azy ny programa.
Nandritra ny nanaovanay an'io dia tsy nahazo script mametaveta mihitsy izay naseho na hitan'ny antivirus izahay ary nandeha soa aman-tsara ny Bluestacks.
Ara-dalàna ve ny fampiasana Bluestacks?
Araka ny fantatsika rehetra fa, android dia rafitra fandefasana loharano misokatra ary ny BlueStacks dia emulator, izay maka tahaka na mampandeha rafitra fiasa android amin'ny biraonao. Android dia rafitra fiasa open-source izay midika fa tsy misy olona afaka mitory anao amin'ny fampiasanao azy. Noho izany dia ara-dalàna ny fampiasana BlueStacks.
Famaranana - Milamina ve ny Bluestacks?
Rehefa avy nandalo ity lahatsoratra ity izahay dia nahazo valiny tamin'ny hoe 'Milamina ve ny Bluestacks?'
Ny valiny diaYES;izany diaazo antoka tanteraka hampiasa BlueStacks. Tsy mbola nahita olana momba ny malware na ny zava-bita izahay raha nandinika azy io.
Na dia ireto misy fomba vitsivitsy azonao ampiasaina hampiasainao hampiasa Bluestacks soa aman-tsara:
Sintomy ny BlueStacks avy amin'ny tranokala ofisialy ihany. Aza esorina amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo izany. Nomena anao ny rohy ofisialy mankany amin'ny BlueStacks ianao ahafahanao misintona azy.
Aza mampiasa BlueStacks amin'ny PC izay misy famaritana ambany. Nampidirinay ny lisitry ny fepetra arahana etsy ambony izay ilainao ny hampandeha tsara ny BlueStacks amin'ny rafitra fiasa Windows sy Mac anao.
Raha vao nametraka BlueStacks ianao dia misintona rindranasa izay voamarina ao amin'ny Google Play Store.
Manantena izahay fa ity lahatsoratra ity dia nanampy anao hahita ny valin'ny fanontanianao. Raha tianao ny lahatsoratra na raha manana sosokevitra na eritreritra momba an'io ianao dia alatsaho ao anaty boaty fanamarihana izany.
Tsy hanaiky ny teny miafiko ny netflix
mandra-pahoviana ny fitsarana ambaratonga voalohany an'i amazon
ireo sary mihetsika maro anarana
sarimihetsika feno maimaim-poana
vidin'ny hbo isam-bolana izao
mijery sarimihetsika farany maimaim-poana amin'ny Internet